मधेसको असन्तुष्टि थप बढेको छ : रीता साह- कुराकानी - कान्तिपुर समाचार
आश्विन ३, २०७८ सुशीला तामा‌ङ
काठमाडौँ — ‘म सकिएको दिन यो ब्रह्माण्ड पनि सकिन्छ । त्यो दिन यो समय मृत सावित हुन्छ । कुनै पनि अस्तित्वको के अस्तित्व रहला, जब म विलीन हुन्छु ।’ अँध्यारो रंगमञ्चभित्र थोरै प्रकाशमा धुमिल देखिने ‘म’ पात्रले बोलेको संवाद ।
यो ब्रह्माण्ड, समय, अनेकौं सम्बन्ध, चरित्र र सँगै जोडिन आएका अनगिन्ती रूपमा तपार्इं/हामीभित्र ‘म’ कता छ ? ‘म’ को हुँ ? ‘म’ के खोजिरहेछु, ‘म’ बिना यी सब कुराको के अर्थ ? यिनै प्रश्नलाई खोतल्दै अघि बढ्छ नाटक ‘म’ । शुक्रबारदेखि सिनामंगलस्थित ‘पुरानो घर’ थिएटरमा मञ्चन सुरु गरिएको ‘म’ मा आफैंभित्रको ‘म’ को अस्तित्वलाई खोजी गर्ने जमर्को गरिएको छ । छेपारोको रंगझैं समय र परिस्थितिअनुसार बदलिरहने मानिसका अनेकौं शब्दभित्र बन्ने चरित्रमा ‘म’ खोतल्ने हो भने सबै अर्थहीन छन् । यो ब्रह्माण्डको केन्द्रबिन्दु ‘म’ मा निहित छ । जीवनका सुख, दुःख, असल, खराब सम्पूर्ण चिजबिज यसैभित्र छन् । ‘म’ को अन्त्यसँगै सबै कुरा सकिनेछन् भन्ने मूल भाव नाटकले बोलेको छ ।
नाटकमा लामो समयको अभिनय यात्रामा एक कलाकारले फेला पारेको ‘म’ को अस्तित्व खोजिएको छ । एउटै जीवनमा ऊ अभिनेताका रूपमा राजा, वकिल, नेता, क्रान्तिकारी योद्धाजस्ता अनेकौं चरित्रमा अभिनय गर्ने प्रयास गर्छ । चरित्र निर्वाह गर्दै जाँदा ऊ कहिले खराब त कहिले असल रूपमा देखिन्छ । थुप्रै चरित्रमा उसले आफैंभित्रको ‘म’ लाई भेटाउँदैन र प्रश्न गर्छ, ‘म को हुँ ? लाग्छ यहाँ केही सत्य छैन । मेरो ब्रह्मको, मेरो ग्रहको, हरेक ग्रहले झूट सावित गरिदिन्छ ।’
नाटकको अवधिभर पात्रले जसरी ‘म’ लाई अर्थ्याउँदै जान्छ, त्यसरी मञ्चमा रहेका प्रत्येक दर्शकले चुपचाप आफैंलाई नियालिरहेको भान हुन्छ । मानिस जन्मेपछि कसैको छोरा, छोरी, दाइ, भाइ, दिदीबहिनी, श्रीमती जस्ता अनेकौं सम्बन्धको नाम पाउँदै जान्छ । सम्बन्धमा बनेका शब्दानुसार उसको चरित्रको निर्माण हुन्छ र स्वभाव स्वतः परिवर्तन हुँदै जान्छन् । नाटकले भन्छ, ‘सबै मानिस वास्तविक जीवनका अभिनेता हुन् । सबैले अभिनय गरी नै रहेका छन् । जसमा ‘म’ गौण छ । म र मेरो भन्ने परिधिबाट मानिस दूर छन् ।’
नाटकले मुख्यतः कलाकारको जीवनको अनुभवमार्फत आम मानिसलाई स्वयंको अस्तित्व खोजी गर्न सुझाएको छ । रंगमञ्चको दुनियाँ, कलाकारको जीवन, अभिनेता बन्न उसले गरेका अनेक प्रयास र चरित्रलाई औंल्याउँदै नाटकले रंगकर्मीको भोगाइ प्रकाश पार्न खोजेको छ । पात्रले अभिनेता बन्ने महाज्ञान त प्राप्त गर्छ तर उसले यसलाई व्यर्थ मानेको छ । रंगमञ्च तथा फिल्मका कलाकारलाई ऊ फिक्का देख्छ । आफैंलाई भन्छ, ‘म रंगमञ्चको अभिनेता होइन ।’
सुलक्षण भारतीको लेखन तथा निर्देशन रहेको नाटकमा भारतीकै सोलो प्रस्तुति छ । भारतीका अनुसार नाटक एक कलाकारले अनुभव तथा चरित्रको खोजीमा पत्ता लगाइएको ‘म’ हो । नाटक असोज २० गतेसम्म मञ्चन गरिनेछ ।
प्रकाशित : आश्विन ३, २०७८ १०:५२